Indlela yokuthengisa nge-imeyile ephumayo inokuxhasa njani iinjongo zakho zokuthengisa | Martech Zone
Ukuthengiswa okungekho ulungile.
Uqhuba ukugcwala kwiwebhusayithi yakho.
Uguqula ezinye zeso sigxina kwaye uthengise iimveliso kunye neenkonzo zakho.
Inyani yile yokuba kunzima ngakumbi kunangaphambili ukufumana isiphumo sephepha lokuqala likaGoogle kunye nokuqhuba ukugcwala kwezinto eziphilayo.
Ukuthengiswa kokuqukethwe Kuya kukhuphisana ngokuqatha.
Ukufikelela kwezinto eziphilayo kumajelo eendaba ezentlalo kuyaqhubeka ukwehla.
Ke ukuba nawe uqaphele ukuba ukuthengisa ngaphakathi kungenakwanela, kuya kufuneka uyinike lo tyhala olongezelelweyo ukuze ufumane iziphumo ozilandeleyo.
Kwaye kulapho intengiso ye-imeyile ephumayo ingena khona.
Ukuthengisa nge-imeyile ephumayo
Intengiso ye-imeyile ephumayo imalunga nokufikelela kuluhlu ekujoliswe kulo kakhulu lwabantu abanokukunceda kwishishini lakho.
Ayisiyo imeyile yakho ebandayo apho uphefumla umyalezo ofanayo kumawakawaka abantu. Yinto ephucukileyo ngakumbi kwaye icebo kunoko.
Ngamaqhinga nezixhobo ezifanelekileyo, Intengiso ye-imeyile ephumayo inokusebenza kakhulu ekwandiseni ukubonakala kwegama lakho kunye nokukhokelela kwishishini lakho.
Sebenzisa isixhobo, njenge UkufikelelaPlus, eyilelwe ngokukodwa ukufikelela ngaphandle kwe-imeyile iya kukuvumela ukuba uthumele ii-imeyile ezizezakho kubaphulaphuli abancinci, ukuseta ukulandelelana, ukulandelela lonke unxibelelwano namathemba akho, ukulinganisa iziphumo zamaphulo akho, kunye nokunye.
Ideshibhodi ikunika ukujonga kwinqanaba eliphezulu lokusebenza
Bhalisela i-OutreachPlus ye-14 yoSuku lokuSimahla
Ngoku, makhe sijonge amanye amaqhinga asebenzayo onokuwasebenzisa ukuthengisa ishishini lakho usebenzisa isixhobo sokufikelela kwi-imeyile.
Yakha amakhonkco ukwandisa itrafikhi.
Amakhonkco okwakha amakhonkco asebenza kwimida emibini-ayakunceda wakhe iprofayile yekhonkco eyahlukileyo ebaluleke kakhulu kwi-SEO, kwaye bazisa ukugcwala okuphezulu kwiwebhusayithi yakho.
Kodwa, ukuze ufumane ezi zibonelelo kufuneka ufumane amathuba okwakha amakhonkco afanelekileyo okt onegunya, iisayithi eziphakamileyo ezinxulumene kakhulu nesihloko sakho kwaye ke ufikelele kuzo.
Zininzi iindlela zokwenza amakhonkco, kodwa Nazi ezimbalwa ezisebenza kakuhle kakhulu:
Amakhonkco okuncoma -Fumana amanqaku ancomekayo kwiindawo ezinxulumene noko kunye nokunxibelelana nokunxibelelana.
Amakhonkco aphukileyo -Fumana amakhonkco aphukileyo kwiindawo ezinamagunya aphezulu usebenzisa isixhobo esinjengaso Ahrefs kwaye uqhakamshelane nabo unikeze ikhonkco lokutshintsha.
Amakhonkco amaphepha ezixhobo -Fumana amaphepha afanelekileyo oovimba kwaye ufikelele ekunikezeleni ngemithombo esemgangathweni eya kuthi yongeze ixabiso kwaye ilingane ngokugqibeleleyo kunye nezinye izixhobo ezikwelo phepha.
Ikhonkco lokwakha linokuchitha ixesha, kodwa lixabiseke kakhulu, ke kufuneka uququzelele ukufikelela kwakho.
Yandisa ukufikelela komxholo wakho ongcono.
Ukufikelela nge-imeyile yindlela eqinisekisiweyo, esebenzayo kakhulu yokuqhuba ukugcwala kunye nokuzibandakanya kumxholo wakho.
Unokufikelela kubachaphazeli kwishishini lakho, iibhlog ezinxulumene noko, okanye nakumaqabane oshishino abaphulaphuli abanokuba nomdla kwisihloko sakho. Logama umxholo wakho ubaluleke kakhulu, ukuwukhuthaza ngokufikelela kuzokwandisa ukufikelela kwawo kwaye kunokuzisa izikhokelo ezitsha zeshishini lakho.
Nokuba yeyiphi indlela, kuya kufuneka ubenayo Isicwangciso esiliqili sokukhuthaza umxholo wakho.
Ukuchaphazela abachaphazeli ukwakha uphawu lwakho.
Ukuthengisa okuchaphazelekileyo kunokuba nokusebenza ngokukuko. Ngapha koko, enye ingxelo ifumanise ukuba Yonke i- $ 1 oyichitha kwintengiso yempembelelo ufumana i-6.50 yeedola umva.
Okokuqala, kuya kufuneka wenze uluhlu lweempembelelo ezichaphazelekayo kwi-niche yakho kunye nephulo olisebenzisayo, unakho ukuqhuba abaphulaphuli babo ukuba bathathe amanyathelo, kwaye bayilungele imveliso yakho. Unga lula fumana abachaphazeli abafanelekileyo ngeGroupHigh.
Emva koko ungalayisha uluhlu lwakho kwisixhobo sokufikelela kwaye uqale ngokwakha iphulo lakho. Qiniseka ukuba wenza ii-imeyile zakho zobuqu kwiimpembelelo nganye nganye ukuze wandise amathuba okufumana impendulo.
Izixhobo eziphumayo zokuthengisa nge-imeyile zilungile kulawulo lwenkqubo yokufikelela, kodwa zibaluleke kakhulu ekugcineni umnwe wakho kwimpompo yobudlelwane bakho nabaphembeleli njengoko bekhula.
Yandisa ukubonakaliswa ngokufikelela kwimithombo yeendaba.
Ukufikelela kwimidiya yindlela efanelekileyo yokuvelisa ukubonakaliswa kunye nokubonakala kwegama lakho kufuneka likhule. Ukukhankanywa kwiindawo ezinamagunya eendaba kukunika ukuthembeka komntu wesithathu kwaye uqhube ukugcwala ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi yakho.
Kodwa… Kuya kufuneka ujolise abahleli abalungileyo, intatheli, kunye neebhlog, abantu abanokuba nomdla kweli bali ulirholayo. Kwaye oku kusibuyisela kukubaluleka kokuba noluhlu ekujoliswe kulo kakhulu lwabafowunelwa.
Khangela abantu abasele begubungele amabali afanayo kodwa qiniseka ukuba le nto uyibekayo inekona enomdla nengafaniyo.
Unokwakha iphulo le-PR ukuya:
Nyusa imveliso / inqaku / inkonzo yakho yamva nje
Biyela umbono webali
Nikezela ukufaka igalelo kumanqaku amanqaku azayo
Kuba iintatheli kunye nabahleli ngabantu abaxakeke kakhulu, ngokuqinisekileyo kuya kufuneka ube nomonde kwaye uthumele ii-imeyile zokulandela.
Ukuba nesixhobo esinokuzenzekelayo kwinkqubo yokulandela kunye nokwenza ii-imeyile ezizezakho ezisekwe kwizenzo zabamkeli ziya kuba lixesha elininzi lokugcina ixesha. Kwaye awusoze ulahlekelwe ngumkhondo wee-imeyile okanye zonxibelelwano ezibalulekileyo kwimithombo yeendaba.
Ukuthengisa nge-imeyile ephumayo (okt ukufikelela kwi-imeyile) kunokuxhasa isicwangciso sakho sokungena kwaye kube negalelo kwiinjongo zakho zokuthengisa ngokubanzi.
Ukuba awukabikho, amaqhinga ama-4 esithethe ngawo kweli nqaku yindawo efanelekileyo yokuqala ngenkqubo yakho yokufikelela. Zixhobise ngesixhobo sokufikelela ukuze uzenzele, wenze lula, kwaye ukhawulezise inkqubo kwaye uya kuseta!
tags: i-imeyile yokufikelelangokweloukuthengisa okunempembeleloimeyile ephumayoukufikelela outusplusiqhinga lokwazisa